मासुको प्रयोग कसरी गर्ने ? | Ratopati
शाकाहारीले के खाने ?
personडा. अरुणा उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १९, २०७८ chat_bubble_outline0
चाडपर्व रमाइलो गरी मनाउनुपर्छ । तर, सन्तुलित खानेकुरातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । शरीरलाई चाहिने मात्राभन्दा बढी मासु खाँदा स्वास्थ्य समस्या पनि आउन सक्छ भने शरीरलाई विभिन्न प्रकारका प्रोटिन दिने खाने कुरातर्फ ध्यान नदिँदा सन्तुलित भोजन हुँदैन । शरीरलाई चाहिनेभन्दा बढी मासु खाँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
विदेशतिर मासु काटेर डिप फ्रिजमा राख्छन् र आफूलाई चाहिएका बेला निकालेर पकाउँछन् । हामीकहाँ चाहिँ धेरै मासु एकैपटक पकाएर फ्रिजमा राख्ने, त्यसपछि पुनः खानेबेलामा सबै निकालेर एकैचोटि तताउने, चाहिएको खाने अनि फेरि फ्रिजमा राख्ने गरिन्छ । यसरी फ्रिजमा राख्दै, बाहिर निकाल्दै खाँदै फेरि फ्रिजमा राख्दा मासुमा भएको पौष्टिक तत्व र गुणत्मकता घट्छ ।
डिप फ्रिजमा काँचो मासु राख्ने, जति चाहिन्छ, त्यतिमात्रै निकालेर पकाउने गर्नुपर्छ । जुनसुकै खानेकुराहरु फ्रिजमा राखेको २४ घण्टादेखि ४८ घण्टाभित्र खानुपर्छ । सेलरोटी, पुरी लगायत कुनै–कुनै खानेकुरा अलि लामो समयसम्म रहन सक्छ ।
(पोषणविद डा. अरुणा उप्रेतीसँग रातोपाटीकर्मी माया श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)
#मासु# शाकाहारी भोजन
‘३०/३५ वर्षका युवामा पनि मधुमेह देखिन थाल्यो’
पखालामय काठमाडौँ !